Wararka - Waxqabadka kooxda ee 2021
Waxqabadka kooxda dhisme ee Yantai Amho International Trade Co., Ltd.
Jun 15, 2020, waxaan qabanqaabinnay howlo dhismo kooxeed oo ka socday maxkamadda kubbadda koleyga. Waxqabadkaani wuxuu bixiyaa gole kor loogu qaadayo wada xiriirka iyo isfahamka shaqaalaha, hagaajinta u heellanida shaqaalaha, soo bandhigida dhaqankiisa ganacsi, iyo xoojinta wadajirka.
Waxaan u kala baxnay saddex qaybood. Waxqabadkaani wuxuu ka kooban yahay afar qaybood: qaybta hore waxay dejineysaa astaamo kooxeedyo, magacyo, hal ku dhigyo iyo heeso kooxeed; qaybta labaad waa mala-awaal ereyo, si loo kormeero heerka isfaham ee midba midka kale; is aaminaadku waa muhiim waxqabadka saddexaad; qaybta soo socota waxay muujineysaa xirfadaha wada xiriirka. Ugu dambeyntiina waxaa soo koobay maareeyaha guud Richard Yu oo kooxdii guuleysatay ay heshay abaalmarin.
Waxqabadkani wuxuu ahaa mid aad u guuleeystay dhammaan asxaabtiina waxay ku jireen niyad sare. Saaxiibtinimada iyo kalsoonida ka dhaxeysa asxaabta ayaa la xoojiyay, muhiimada wada shaqeynta ayaa sidoo kale lagu soo koobay waxqabadkan.